Ukunceda Abasweleyo Nabahluphekileyo: Isizathu Sokuba Abanye Abantu Babhiyozele IKrismesi
“Oneliso elinobubele uya kusikelelwa, kuba ukunika isisweli ukutya kwakhe.”—IMIZEKELISO 22:9.
Ngenxa yokuba uYesu wanceda amahlwempu, abantu abagulayo nabasentlungwini, nabanye abantu namhlanje bafuna ukwenza okufanayo. Bavakalelwa kukuba elona xesha lokwenza oko kungexesha leKrismesi, xa imibutho enceda abantu abasweleyo isenza imigudu engakumbi yokucela amalizo.
Ngexesha leKrismesi, abantu abaninzi bazizinxada-nxada bethenga kwelinye icala ziziyunguma yaye batyelela abahlobo namalungu eentsapho zabo. Zonke ezi zinto zibashiya bengenaxesha, amandla okanye imali yokunceda amahlwempu mhlawumbi, kunokusuka nje banikele ngemali kwimibutho ecela amalizo.
“Musa ukwala nokulungileyo kwabo kuselungelweni labo ukukufumana, xa kusemandleni esandla sakho ukukwenza.” (IMizekeliso 3: 27) Amahlwempu nabantu abasentlungwini abasokoli ngexesha leKrismesi kuphela. Ukuba ubona umntu othile odinga uncedo yaye “kusemandleni esandla sakho” ukumnceda, kutheni ulinda de kufike ixesha leKrismesi ukuze wenjenjalo? Izenzo zakho zokubonakalisa ububele novelwano ziya kusikelelwa.
“Ngolokuqala usuku evekini ngamnye wenu endlwini yakhe makabekele bucala okuthile kuvimba ngokwengeniso ayizuzileyo.” (1 Korinte 16:2) Umpostile uPawulos wanikela eli cebiso kumaKristu okuqala awayefuna ukunceda abantu abasweleyo. Ngaba ‘ubungenakubekela bucala’ imali ozakumane unceda ngayo abantu okanye imibutho eyisebenzisa kakuhle imali? Ngale ndlela uyaqinisekisa ukuba unceda izisweli ngokwamandla akho.
“Musani ukulibala ukwenza okulungileyo nokwabelana ngezinto nabanye, kuba uThixo uyakholiswa yimibingelelo enjalo.” (Hebhere 13:16) Ungalibali ukuba phezu ‘kokwabelana ngezinto nabanye,’ kukwafuneka sikhumbule ukwenza okulungileyo’ okanye sincede abanye. Ngokomzekelo, abazali abaqondayo bayabaqeqesha abantwana ukuze bancede abantu abadala kwimisebenzi eyahlukahlukeneyo; njengokukhuthaza abagulayo ngokubabhalela, ukubatyelela okanye ukubafowunela nokuba nomdla wokunceda abanye abantwana abasokolayo nabaneziphene. Umphumo iba ngowokuba, abantwana bafunda ukuba nobubele yaye baba nesisa ngawo onke amaxesha.
Abazali abaqondayo bayabaqeqesha abantwana ukuze bancede abantu abakhulileyo, abagulayo nabanye abantwana abasokolayo. Umphumo iba ngowokuba, abantwana bafunda ukuba nobubele yaye baba nesisa ngawo onke amaxesha.
Ifuthe LeKrismesi—Ukunceda Abasweleyo